Bethuel Kiplagat Aabihii Dastuurka Dowladda Federaalka Oo Ku Dhintay Magaalada Nairobi [Warbixin]
Saturday July 15, 2017 - 15:03:03 in Wararka by Super Admin
Bethuel Kiplagat oo ka mid ah Siyaasiyiinta ugu caansan dalka Kenya, Xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ugu muhiimsanaa ee soo maray dalkaas ayaa shalay oo Jimca ah ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, ka
Bethuel Kiplagat waa aas-aasihii DF-ka
Bethuel Kiplagat oo ka mid ah Siyaasiyiinta ugu caansan dalka Kenya, Xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ugu muhiimsanaa ee soo maray dalkaas ayaa shalay oo Jimca ah ku dhintay isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, ka dib xanuun dheer oo uu la tiicayey dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Bethuel Kiplagat Wuxuu la soo shaqeeyey dowladii uu hogaaminayey Daniel Arap Moi ee talada dalka Kenya heystay mudadii u dhexeysay 1978 ilaa 1991, Wuxuuna ka soo qabtay xilal kala duwan.
Wuxuu soo noqday Safiirka Kenya ee Faransiiska, Wakiilkii Kenya u joogay Ingiriiska iyo Xog-hayaha joogtada ah ee wasaaradda arimaha dibadda Kenya.
Bethuel Kiplagat Wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiin ku lug lahaa Xasuuqii Wagalla ee 1984-tii ka dhacay Magaalada Wajeer kaas oo lagu dilay in ka badan 3000 oo Muslimiin ah, laguna jirdilay kumanaan kale, sidoo kalena lagu kufsaday boqolaal dumar ah.
Wuxuu ahaa mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee ay la kulmaan Muslimiinta ku dhaqan gobolka NFD ee ay ku kaceen ciidamada Amaanka Kenya.
Dowlada Kenya waxay sheegtaa in waxa meesha ka dhacay uusan ahayn Xasuuq balse uu ahaa howlgal ciidamadu ay fuliyeen oo lagu baacsanayey wax ay ugu yeertay ‘dambiileyaal hubeysan’
kulankii qarsoodiga ahaa.
Bethuel Kiplagat Wuxuu ahaa xog-hayaha joogtada ah ee Wasaarada arimaha dibadda Kenya xilligii uu dhacayey Xasuuqaas, waxayna dad badan sheegaan in uu ka mid ahaa shaqsiyaatkii dhowrka ahaa ee dajiyey qorshihii lagu diyaarinayey gumaadkaasi.
Sanadkii 2010-ka, Hay’ado dhowr ah oo ka mid ah kuwa u dooda xuquuqul Insaanka ayaa baaritaano ay sameeyeen ku sheegay in Bethuel Kiplagat in uu ku lug lahaa Xasuuqii Wagalla ee sanadkii 1984-tii, uuna fadhiyey kulankii qarsoodiga ahaa ee lagu go’aamiyey xasuuqaas.
Ka dib eedeymo iyo guux-warbaahineed oo uu la kulmay xilligaas ayaa keentay in uu iska casilo gudoomiyaha gudiga Xaqiiqda, Cadaaladda iyo dib u heshiisiinta ee loo magacaabay sanadkii 2009-kii.
Balse Dowladii xilligaas jirtay ee uu hogaaminayey Kibaki ayaa duugtay dhamaan baaritaanadii iyo dabagalkii lagu hayey dowrka uu ninkan ku lahaa Xasuuqii Wagalla, Waxaana dib loogu soo celiyey xilkii uu hayey ka dib markii laga yureeyey dhamaan hay’adihii iyo shaqsiyaatkii ku dabajiray kiiskiisa.
Kaalintii Kiplagat Ee Dhismaha Dowlada Federaalka Soomaaliy sanaddii 2004
Bethuel Kiplagat wuxuu ahaa Ninkii beesha caalamka uqaabilsanaa agaasinka shirkii loogu magac daray [dib uheshiisiinta Soomaaliya ee samaddii 2004 lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee wadanka Kenya].
Wuxuu ahaa bud-dhigihii dastuurka DF-ka ee iminka jira, isagoo aad moodid madaxweynaha Soomaaliya ayuu dagaal oogayaashii Soomaaliya iyo qurbajoog dibadda lagusoo tababaray wuxuu shirar ugu qaban jiray magaalooyinka Mbaghati (Doofaareey) ,Eldoreet iyo Nairobi.
Kiplagat wuxuu ahaa Ninkii qoray dastuurka Dowladda Federaalka wuxuuna noqday Marjac ay ulaabtaan hoggaamiyaasha dabadhilifyada Soomaaliya marka ay isqabtaan, Bethuel Kiplagat ayaa lacago malaayiin dollar ah beesha caalamka waxa loogu yeero uga aruursaday shirarkii Soomaalida loogu qaban jiray gudaha dalka Kenya.
Kiplagat ayaa hadda ka hor Cabdullaahi Yuusuf iyo dagaal oogayaashii Muqdisho ku tilmaamay waxma tarayaal mudan in lagu guro xabsiyada kadib markii ay xildhibaanadii Baarlamaanka ay isku feereen Nairobi kuraasna isla dhaceen sanaddii 2004 xilligaas oo laba garab ay ukala jabtay xukuumaddii Cali Max'med Geedi.
illaa iyo hadda xildibaanada Baarlamaanka DF-ka marka laga hadlayo arrinta dastuurka waxay soo daliishadaan Xeerarkii Kiplagat ee Doofaareey Mbaghati oo ah tuulo lagu xanaaneeyo xaywaanka doofaarka balse aheyd halkii lagusoo dhisay dowladda Federaalka ee uu hadda madaxweynaha ka yahay Farmaajo.
Afar Hogaamiye Oo Halaagsamay.
Bethuel Kiplagat oo 81 jir ahaa ayaa noqonaya Hogaamiyihii Afaraad oo muddo laba todobaad gudahood ah ka dhinta dowladda Kenya.
Senator-ka laga soo doorto gobolka Laikipia ee la lagu magacaabo G.G Kariuki ayaa 30-kii June ku dhintay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya.
G.G Kariuk, Wuxuu isagana ahaa gaalkii ka dambeeyey Xasuuqii Garissa ee 1980-kii, kaas oo lagu dilay kumanaan Muslimiin ah, laguna burburiyey guryo fara badan.
Joseph Nkaisser oo isna ahaa waziirkii hore ee amniga gudaha Kenya ayaa isna 8-dii bishii July Isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi.
Talaadadii la soo dhaafayna, waxaa sidoo kale baqtiyey Nicholas Biwott oo ka mid ahaa golaha wasiirada ee xukuumada Kenya.